Shandira pamwe sechikwata neGoogle suite
Yakatumirwa ne Tranquillus | Oct 27, 2020 | Pamusoro pewebhu
Iyo Google suite yezvishandiso iri kuramba ichizivikanwa zvakanyanya maererano nemasevhisi nevashandisi. Akaundi yeGoogle inokupa mukana kune akawanda ehofisi zvishandiso, zvese pachezvako uye nehunyanzvi. Mukudzidzira uku, Nicolas Levé anokukoka iwe kuti utarise zvese zvishandiso zveGoogle kuitira kuti uve nekuona kwepasirese kwehukuru hwezviitiko maererano nekugona uye kutaurirana. Iwe uchaona maitiro ekuwana akasiyana masevhisi pasina kuisa chero chinhu ...
Iko kudzidziswa kunopihwa paLinkedin Kudzidza kuri kwemhando yepamusoro. Zvimwe zvacho zvinopihwa mahara mushure mekubhadharwa. Saka kana musoro wenyaya usingazeze, hauzonyadziswe. Kana uchida zvimwe, unogona kuedza kunyorera kwemazuva makumi matatu mahara. Pakarepo mushure mekunyora, bvisa kuvandudzwa. Unogona kuva nechokwadi chekuti hauzobhadhariswa mushure menguva yekutongwa. Uine mwedzi une mukana wekuzvivandudza pane yakawanda misoro.
Shandira pamwe sechikwata neGoogle suite Zvita 12th, 2020Tranquillus
VERENGA Ziva huchapupu hwaZeineb, mudzidzi wefocop akazova mugadziri uye bhizinesi maneja.
pashureIzvo zvakakosha zveGoogle Calendar / Gmail / Kutaurirana
zvinoteveraNheyo dzeProjeki Management: Maitiro Etsika
Ndine mvumo here yekudzikisa huwandu hwamazuva ezororo rekubhadharwa rakawanikwa nekuda kwemaawa asina kushanda mukati mehurongwa hwechiitiko chisina kukwana?
Rwendo naBrigitte Klinker kuenda kudhipatimendi reArdennes
Insta Anotanga-Sei kutanga zvakanaka pa Instagram muna 2020
Kusaina chibvumirano neAction Logement